Sefafi: “Nihasimba ny politika…” | NewsMada
Sefafi: “Nihasimba ny politika…”
“Nahitana ny taona 2018 fa nihasimba ny fiainana politika eto. Porofo mihariharin’ny tsy fananany etika ny fihetsiky ny mpanao politika sy ny an’ny antokony ary ny mpikatroka.” Io ny fanambaran’ny Sefafi: “2018, taom-pifidianana nosimbaina”, ny 5 janoary. Lainga sy fanaratsiana, asandratra ho fahamarinana; ny tombontsoa manokan’ny mpitondra sy ny fianakaviany, natao ambony lavitra no ho ny tombontsoa iombonan’ny firenena. Nefa mbola afa-misitraka hatrany ny zony amin’ny maha olom-pirenena azy ireo efa meloka satria nanapotika, mbola manohy mitana andraikitra ambony hatrany ary tsimatimanota tanteraka eo anatrehan’ny lalàna.
Tsy feno ary nahodinkodina ny lisitry ny mpifidy
25 tapitrisa eo ho eo no isan’ny mponina eto Madagasikara, ary 18 no salanisan’ny taonany. Nefa tsy hita hoe nankaiza ny mpifidy 2 ka hatramin’ny 3 tapitrisa tsy voaisa: iray amin’ny mpifidy dimy. Miisa 9 913 599 ny mpifidy voaisa, septambra 2018.
Lainga sy kolikoly ny fandrafetana ny fitsipi-pifidianana, fa nisy tolo-kevitra momba izany natolotry ny governemanta ny Pnud sy ny solontenan’ny firaisamonina sivily, tany Antsirabe ny taona 2017. Nahavitana dingana lehibe ny fitambarany: famerana ny vola lanina ho an’ny fifidianana, fandrarana ny famatsiam-bola avy any ivelany, fangaraharan’ny kaontim-bolan’ny fifidianana…
Fanararaotam-pahefana sy fanafenan-javatra ny fankatoavana ny lalàm-pifidianana. Nanandra-tena ho mpanao lalàna ny HCC, nanova ny andininy sasany araka ny nahimpony. Navoakan’ny filohan’ny Repoblika, ny 11 mey 2018, ny lalàm-pifidianana, tsy feno sady namboaboarina.